Qisadayda: Habeen ka hor taariikhda maxkamadda – Abschir Hassan Foundation
Qisadayda: Habeen ka hor taariikhda maxkamadda
Weligeey ma hilmaami doono caawa bartamihii Maarso. Kaliya waan iska ilaalin karaa, in kasta oo wiilkaygu lahaa habeen aamusnaan ah oo isbeddel ah, laga yaabee xitaa inuu hurdada ka dhex baxo. Tani waxay dhacdaa si dhif ah, maxaa yeelay waxay ku dhacdaa suuxdin, murugo iyo calool xanuun gaar ahaan habeenkii. Ilaa dhalashadiisa, waxaan awoodnay inaan jiifno dhawr habeen oo keliya. Isagu had iyo jeer waa qof aan xasilloonayn, oo welwel qaba isla markaana u baahan ilaalin, nabadgelyo iyo dib-u-xaqiijin. Badanaa waa inaad guurtaa dhowr jeer saacaddii ilaa ay nasato. Laakiin wuu aamusnaa habeenkaas gaarka ah.Taas bedelkeeda, waxaan ku dhex noolaa habeen aad u deggan.
In kasta oo aanan bukayn, haddana waan seexan kari waayey. Dareennadaydu way waalanayeen, mararka qaarkood waan qabowsanahay, ka dibna mar kale waan diirnaa. Waan baqay, waan gariiray. Fikirka fekerka ayaa isu rogay mid aan la joojin karin oo xusuusiyadiina waxay u ordeen sidii filim oo kale oo maskaxdayda ku jira. Aad baan u bukooday cidhiidhi oo waan ooyay, oo waxaan kala qabsaday rajo iyo cabsi. Waxay ahayd habeen dheer, dhamaadka oo aan dhinac ka rajaynayay, laakiin dhinaca kale sidoo kale waxay ahayd cabsi buuxda, sababtoo ah waxaan lahaa taariikhda muhiimka ah ee maxkamada 9 saac ee subaxnimo.
Taariikhdaan maxkamada waxay ahayd taariikhda ugu muhiimsan nolosheyda. Waxay ku saabsanayd wax kasta, gaar ahaan caddaaladda, iyo ku saabsan luminta rajada ah in caddaalad jirto. Xaqnimadii aan illaa iyo hadda aan la kulmay. Sidaas ayaan habeenki u dhexeeyey rajo iyo rajo xumo, oohin, tukasho iyo inkaar, oo weyddiiyey doonista Ilaah. Waxaan haystay su’aalo badan laakiin jawaab kama helin. Habeenkan u muuqda inaan dhammaad lahayn ayaa wax badan igu soo kordheen. Caruurnimadayda iyo qaan-gaarka, guurkeyga iyo sida ay u burbureen, dhalashada caruurteyda iyo gaar ahaan wiilkeyga, tallaabo kasta oo nolosheyda ah.
Sida badan ee noloshayda, waxaan sidoo kale qaatay aroortii runti maalinta oo dhanna waan kala go’ay: Waan qaatay oo adkaystay wixii igu dhacay. Taasi waa sida aan u shaqeeyey aniga oo aan u oggolaan dareenkayga.